अन्तर्राष्ट्रिय – Namaste Dainik
काठमाडौ । सबैको होस उडाउने एक खबर अहिले बाहिर आएको छ । भारत, राजस्थानको सीकरमा एक महिलालाई नां-गो नुहाउन वाध्य पारेको घटना सम्बन्धमा एउटा नयाँ मोड आएको छ । समाजका पञ्च (मुखीया) हरुले पीडित महिलालाई सार्वजनिक रुपमा न-ग्न पारेको आरोप लागेको छ । उक्त फोटो भाइरल गराएको भन्दै प्रहरी चौकीमा उजुरी दर्ता गरिएको छ । […]
September 9, 2020 NamastedainikLeaveaComment on अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनित, के गरे त्यस्तो काम ?
काठमाडौं । इजरायल र यूएईको बीचमा भएको शान्ति सम्झौताका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनित भएका छन् । इजरायल र यूएईको बीचमा भएको शान्ति सम्झौताका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका कारण उनलाई सन् २०२१ को नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनित गरिएको हो । नर्वेली संसद्का सदस्य क्रिस्चियन […]
September 9, 2020 September 9, 2020 NamastedainikLeaveaComment on जब वालकले आमा लाई ठ`क्कर दिने कार माथि आ’क्रोश पोख्दै लात्तीले बजारे…हेर्नुहोस
कुनै पनि आमा’का लागि आफ्ना सन्तान जति प्यारो हुन्छन् ।बालबालि’काहरुका लागि आमाबाबु पनि उत्तिकै प्यारा लाग्छन् । हालै चीनमा भएको सडक दुर्घटनामा एक बालकले देखा’एको आक्रोशले उनी आमाप्रति कति मा’या गर्ने रहेछन् भन्ने देखाउँछ । सडक पार गर्दै गरेको अवस्थमा कारले आमालाई ठ`क्कर दिएपछि ती बालकले बीच सडकमा कारमाथि ला’त्ती प्रहा’र गरे । उक्त भिडियो […]
September 8, 2020 NamastedainikLeaveaComment on बिबाहमा छोरा मन्डपबाटै भा’गेपछी हुनेवाली बुहारी संग ससुराको बिबाह !
एजेन्सी । भारतको बिहारमा एउटा अच’म्म लाग्दो बिबाहको घ’टना भएको छ।बिहार स्थित ६५ बर्सिय रोसन लालको बिबाब २१ बर्सिय कन्या संग हुन उनका छोराले नै बाध्य पारेका छन्।बासतबमा कुरा के रहिछ भने,रोसन लालको छोराको बिबाह सपना नामकी कन्या संग हुनेवाला थियो। बिबाहको दिनमा जन्ती कन्याको घरको ढोकामै पुगेको थियो तर रोसनको छोरा मन्डपबाट एकाएक भा’गे। […]
September 8, 2020 September 8, 2020 NamastedainikLeaveaComment on अरुणाचल चीनको हो भनेपछि भारतमा रुवाबासी
चीनले अरुणाचललाई चीनको दक्षिणी तिब्बतको क्षेत्र रहेको दाबी गरेको छ। चीनको आधिकारिक अखबार ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिजियांगले भने, ‘चीनले कथित अरुणाचल प्रदेशलाई ‘कथित’ रुपमा मान्यता दिएको छैन, अरुणाचल चीनको दक्षिणी तिब्बतको क्षेत्र हो। हामीले पाँच भारतीय सेना यस क्षेत्रबाट हराइरहेका भारतीयको बारेमा प्रश्न प्राप्त गरेका छौं, तर अहिले हामीले यसका […]
नयाँ दिल्ली । चीनसँग लडाँई भएको खण्डमा राष्ट्रिय स्वयम सेवक संघ (आरएसएस) का स्वयंसेवकहरू भिड्ने भएका छन् । उनीहरु भारतीय सेनासँग मिलेर चीनविरुद्ध लड्न तयार छन् । आरएसएसका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार स्वयंसेवकहरूले अनुशासन र शारीरिक प्रशिक्षणका पाठहरू पढिसकेका छन्, त्यसैले उनीहरूलाई लडाईका लागि तयार हुन धेरै समय लाग्ने छैन । यो उल्लेखनीय छ कि […]
काठमाडौ । चीन विश्वकै सबैभन्दा विशाल जलसेनाको फौज भएको देश खुल्न आएको छ । यो कुरा जानकारीमा आएपछि अमेरिका समेत आत्तिएको छ । विगत केही वर्षदेखि उसले जलसेनाको शक्ति कैयौं गुणा बढाएको छ । उसले पाकिस्तान, श्रीलंका र म्यान्मारमा आफ्नो जलसैन्य अड्डा बनाउन खोजेको छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा ऊ अनेकौं जलसैनिक अड्डा बनाउन चाहन्छ […]